Warbixino Ku Saabsan Filimada Dhawaan La Daawan Doono Iyo Kuwa Haatan Hawsha Laga Haayo - Hablaha Media Network
Warbixino Ku Saabsan Filimada Dhawaan La Daawan Doono Iyo Kuwa Haatan Hawsha Laga Haayo
HMN:- Waxaan idiin heynaa warbixino xiiso badan oo ku saabsan filimada dhawaan la daawan doono iyo kuwa haatan shaqada laga haayo badankoodana Bollywood-ka ayay gaar u yihiin warbixinadaan:
Sushant Singh Rajput iyo Kriti Sanon starrer Raabta ayaa goos gooskiisa saameyn xoogan la yimid sidoo kalena muusigada filimkaan mid wanaagsan ayay u egtahay taasi oo sababi karto 9-ka June marka tiyaatarada la saaro filimkaan inuu guul la yaab leh gaaro.
Tiger Shroff filimkiisa Munna Micheal waxaa haatan la shaaciyay in 21-ka July 2017 la daawan doono waxayna midaan xaqiijisay in maalintaas Boxoffice-ka ka dhici doono dagaal sedex geesood ah madaama Director Madhur Bhandarkar filimkiisa Indu Sarkar iyo Ayushmann iyo Kriti Sanon filimkooda Bareily Ki Barfi isla xiligaas la daawan doono.
Super Star Sanjay Dutt filimka uu kusoo laabanayo Bhoomi waxaa la xaqiijiyay in 22-ka September 2017 la daawan doono filimkaan waxaa loo sameyn doonaa xayeysiin balaaran oo xili hore bilaaban doonto.
Shirkada NH Studio ayaa iibsatay xuquuqda qeybinta cajaladaha filimka Half Girlfriend oo ay hogaamiyaal ka yihiin Arjun Kapoor iyo Shraddha Kapoor waxaana la daawan doonaa filimkaan 19-ka May 2017.
Shirkada NH Studio waxay shaaca ka qaaday in filimka Half Girl Friend u diyaarisay 2500 oo tiyaatar gudaha Hindiya waana tiro aad u fara badan fursad fiicana u ah filimkaan ganacsigiisa guud.
Tom Cruise filimkiisa Hollywood-ka ah The Mummy waxaa gudaha Hindiya laga daawan doonaa 9-ka June 2017 waxaana kalsooni weyn lagu qabaa filimkaan inuu ganacsi xoogan gudaha Hindiya kaga sameyn karo sida uu haatan sameenayo filimka Fast & Furious 8 oo kale.
Waxaa moodaa in la gaaray xiligii atirishooyinka Bollywood-ka door gaangester shaashadaha ku matali lahaayeen waayo Shraddha Kapoor filimkeeda Haseena – The Queen of Mumbai ee la daawan doono 14-ka July waxay ku mataleysaa door Gaangester.
Haatana Deepika Padukone ayaa saxiixatay filim uu iska leeyahay Director Vishal Bhardwaj waxayna ku mataleysaa nolosha gabadhii Gaangester-ka ahayd Sapna Didi.
Shirkada KriArj entertainment ayaa mashquulka isku badisay madaama filimkeeda Toilet – Ek Prem Katha ee Akshay Kumar hogaamiye ka yahay la daawan doono 11-ka August 2017.
Kadib shirkadaan waxay si isku xigto u maal galin doontaa sedex filim oo ay hogaamiyaal ka yihiin John Abraham, Anushka Sharma iyo Deepika iyo Irfan Khan filim ay sameenayaan.